WAAN BAAHANAHAY BAKHTIGA LOOMA CUNO! - Hablaha Media Network
WAAN BAAHANAHAY BAKHTIGA LOOMA CUNO!
HMN:- Tan iyo dhamaadkii dagaalkii qaboobaa (the cold war) ee u dhexeeyay reer Bariga iyo reer Galbeedka ama Xulufada Nato iyo Xulufada Warso oo ey kala hogaaminayeen quwadaha Mareykanka iyo Ruushku, waxaa Afrika ku soo badanayay soo rogaal celinta boobka khayraadka qaaradda duxan ee bikrada ah. Waxaa waayadii hore horumood ka ahaa boobka khayraadka Afrika waddamada reer Galbeedka sida Ingiriiska, Talyaaniga, Faransiiska, Boortaqiiska iyo Biljamka. Haatan waxaa gulufkaas ku soo biiray waddamo iskaa wax u qabso ku shaqa geliya waddamada Afrika oo garab rarato ah, oo iyagu hadda ugu badan kuwa khayraadkaas boobaya.
Waxaana waddamadaas ka mid ah China, Hindiya, Turkiga, Isutagga Imaaraatka Carabta (UAE) iyo Sacuudiga. Dhigaalkaan waxaan ku eegi doonaa mashaariicda la sheegay iney dalkeenna ku maalgashanayaan dalalka China iyo Isutagga Imaaraatka Carabta (UAE). Waxaan sidoo kale dulmari doonaa danaha Turkiga iyo danaha ka danbeeya deeqaha uu dalkeena siiyo. Si taa la mid ah waxaan isku dayi doonaa marka hore inaan si guud uga hadlo baahiyaha kala duwan ee dalalkaan u soo hayaamay dalkeena, deedna waxaan qeexi donaa wuxuu yahay maalgashi shisheeye ee tooska ahi (=Foreign Direct Investment “FDI”).
BAAHIDA CHINA IYO HINDIYA
Tirada dadka ku nool China iyo Hindiya marka la isku daro waa ku dhowaad kala bar dadyoowga ku nool dunidaan. Bangiga Adduunka (the World Bank) wuxuu ku qiyaasay in China ey ku noolyihiin 500 oo milyan oo sabool ah. Sidoo kale Bangiga adduunka wuxuu ku qiyaasay in Hindiya ey ku noolyihiin 170 milyan oo sabool ah. Bangiga adduunka wuxuu saboolnimada ku qiyaasaa dakhliga dadka soo gala maalintii. Tusaale hadduu dakhliga qofku ka yar yahay $1.90 maalintii, qofkaasi waxaa lagu tiriyaa dadka saboolnimada ba’ani ay hayso. Waxaan shaki ku jin in labadaan waddan uu dhaqaalahoodu soo kobcayo. Tusaale, Hindiya waa waddanka lixaad ee dunida ugu dhaqaale badan, China waa waddanka labaad xaga dhaqaalaha adduunka. Si kastaba ha ahaatee, labadoodaba kuma filna dhaqaalahaas – dadkatirada badan ee wadamadaas ku nool aawadeed. Labadaan wadan ee dadka tirada badani ku nool yihiin, waxay ku qasban yihiin iney dhaqaale u raadiyaan dadkooda, sababtoo ah labadoodaba midna ma leh khayraad dabiici ah oo badan. Waxaa dhaqaalaha labadaan dal uu ku tiirsan yahay shaqaale rakhiis ah oo ka shaqeeya warshadaha reer galbeed ee ku yaala labadaan dal. Tusaale, Shirkadda dunida ugu weyn ee sameysa telefoonada casriga ah iyo kambuutarada ‘Apple’ waxay degen tahay dalka China oo warshadoodu ku taalaa, teleefoonadooda iPhones, kambuyuutarada Macbook, iyo iPad halkaas ayaa lagu sameeyaa –shaqaalahooduna waa Chinese. Waxay Shirkadda Apple Mareykanka uga soo guurtay oo China u degtay waa shaqaalaha raqiiska ah ee China laga helaayo. Sidoo kale shirkadaha waddamada reer galbeedka ee sameeya adeegyada bulshada sida; adeega bangiga, teleefoonada, adeega korontada IWM waxay badidood degeen waddanka Hindiya si ey uga faa’iideystaan shaqalaha raqiiska ah.
Labadaan waddan -gaar ahaa China- waxay wadaan mashaariic iskaa wax u qabso ah (yacnii ey shaqo gelinayaan dadka degaanka gaar ahaan Afrika oo aan run ahaantii iyaga dhaqaale badan kaga baxeyn) taas bedelkeedana waxay qaadanayaan khayraad cayriin oo bilaa xisaab ah.
DAMACA CARABTA IYO TURKIGA
Waxaa iyana xusid mudan waddamada u soo hayaamay Afrika ma’aha kaliya labadaas waddan ee aan kor ku xusnay oo qudha, ee waxaa iyana jira qaar ka mid ah waddamada Muslimiinta sida Isutaga imaaraatka carabta (UAE), Sacuudiga iyo waliba dalka Turkiga. Seddexdaan waddan iyagoo ku gabbanaya daladda Muslinimada ayaa waxay doonayaan iney iyagana dalowgooda darsadaan khayraadka cayriin ee hoos ceegaaga dalkeena Soomaaliya. Laakiin damaca waddamadaan wuu ka yara duwan yahay kan China iyo Hindiya. Seddexdaan dal dad badni iyo saboolnimo haatan heysataa ma jirto; laakiin waxay ka duulayaan baahi ey u qabaan istiraatiijiyad dhaqaale iyo mid amni oo fog. Tusaale, waddamada Sacuudiga iyo isutaga Imaaraatka maadaama ey deggen yihiin dhul qalalan oo saxro ah, dhaqaale ahaan waxay doonayaan dhul ey maalgashadaan sida; beero, dakado, iyo bad ey ka kaluumaystaan IWM. Sababtuna waxaa weeye waxay rumeysan yihiin in shidaalka oo ah laf dhabarta dhaqaalaha waddamadaan gaar ahaan Sacuudiga iyo UAE uu dhamaan doono goortey ahaataba, ama dunida ey ka gudbi doonto baahida ey shidaalka u qabto oo la hal-abuuri doono tamar ka duwan tan shidaalka –sida gawaarida ku shaqeeysa korontada oo haddaba meelo dunida ka mid ah laga isticmaalo. Dhanka amniga, waddamadaan khaliijka tusaale ahaan, waxaa dagaal ba’an oo taariikhi ah uu kala dhexeeyaa waddanka Iiraan, sidaas aawadeedna waxay doonayaan meelo istiraatiiji ah oo ey ka ilaaliyaan gacanka carabta.
Waddamadaan iyagoo ka duulaya sidii ey u haqab tiri lahaayeen baahiyahooda istiraatijiyeed ayeey waxay heshiisyo loogu magac daray maalgashi la galeen Dawladda Federaalka ee Soomaaliyeed iyo maamul-goboleedyo sabool ah oo ku dhisan musuqmaasuq, sida; Maamulka Puntland iyo Maamulka Somaliland. Haddaan ku horeeyo maamulka Puntland, waxay dawladda UAE la gashay heshiis ah iney dekadda Boosaaso balaarineyso islamarkaana ey maamusho muddo soddon sanadood ah. Sidoo kale Maamulka Puntland wuxuu heshiisyo la galay waddanka China iney dhisaan waddada isku xirta Garoowe iyo Eyl, iyo gegida diyaaradaha ee Magaalada Gaalkacyo. Somaaliland iyaguna waxay galeen heshiis ah in dawladda UAE laga kireeyo saldhig Military oo ey ka dhisaneyso magaala xeebeedka Berbera. Dawladda dhexe ee Soomaaliya waxay heshiisyo ku saabsan dekedda iyo gegida diyaaradaha la gashay waddanka Turkiga. Heshiisyadaan waddamada shisheeye loogu xalaaleynayo khayraadka dalkeena wax wada tashi ah oo lagala sameeyay dadweynaha Soomaaliyeed ma jirto. Sidoo kale, dhamaan heshiisyadaan waxay ka siman yihiin inaan macluumaadkooda oo dhameystiran dibadda loo soo saarin, laf timir baa ku jirta!!!
WAA MAXAY MAALGASHI SHISHEEYE (FDI)?
Sidaas daraadeed, Mashaariicdaan ka socda dalka ee loogu magac daray; maalgashiga shisheeye ee tooska ahi (Foreign Direct Investment “FDI”) oo ey horboodayaan China, Turkiyaiyo UAE waa wax fiican, laakiin wax bilaash ah dunidaan ma jiraan. Sidaa daraadeed waa in la is weydiiyaa su’aalahaan; horta waa maxay maalgashi shisheeye (FDI)? maxay dawladda China ey noogu dhiseysaa mashaariicdaan? yaa kharashka bixinaya? Maxaa dadweynaha loola wadaagi waayay macluumaadka saxda ah ee dhameystiran ee ka danbeysa mashaariicdaan? waa imisa kharashka ku baxaya maalgashigaan? Kharashka la iska rabaa ma lacag baa? mise kheyraad cayriin oo dabiici ah? Haddii ey kheyraad dabiici ah tahay qiimaha maalgashigaan; maxaa lagu qiyaasayaa khayraadkaas? Waddanka maalgashiga sameynaya ma lacagtooda ayeey dalkeena ku maalgashanayaan? Mise daymo ayeey bangiyo nooga soo qaadayaan? Waa in su’aalahaas iyo kuwa kaloo badan jawaab loo helaa.
Maalgashiga shisheeye (FDI) ma’aha wax sahlan oo caadi ah; iska daa inuu yahay bilaash ee. Waddamada maalgashada waddan eysan iyagu laheyn inta badan kuma maalgashadaan dhaqaalahooda, ee waxay dayn kasoo qaataan bangiyo iyo waddamo shisheeye, dayntaas oo wadata dulsaar (interest) aad u farabadan, waxayna daynta iyo dulsaarkaba ku soo xawilaan waddanka ey mashruuca ka maalgashanayaan. Iyaguna sidaas ayeey ku faa’iidaan– faa’iido 100%, marnaba ma khasaaraan – iyagoon lacagtooda waxba ku maalgashan oo qatar eysan iska gelin.
Gebagebadii,waa in si dhab ah loo fikiraa, waan baahanahay bakhtiga looma cuno. Haddii eynaan si dhab ah u xisaabtamin oo isku eegin faa’iidada mashaariicdaan iyo khasaarahooda, ilmaheena ilmahooda ama jiilasha dambe ayaan uga tageynaa DAYMO ey saaran tahay DULSAAR (interest) oo waqti dheer caqabad ku noqda noloshooda iyo horumarkooda. Xaqna ma’aha inaan jiilalka danbe dayn eysan qaadan looga tago. Haddaan si kale u dhigo, dalka yaan si fudud lagu wareejin iyadoo la eegayo in wax uun la qabto, si loogu buuxiyo diiwaanda waxqabadka madaxda (CV) iyo maamulada, iyadoo ujeedku yahay in lagu faano waxbaan qabannay. Waxqabadka dhabta ah waa kan lagu qabto canshuurta dadka laga qaado ee ma’aha mid daymo iyo ribo tafaha la is heysto ilaa aakhiro lagu sameeyo.
W/Q: Abdi J Arab
Wixii talo iyo tusaaleyn ah iigu soo hagaaji cinwaanadaan: arab28@hotmail.com
Igala soco twitter https://twitter.com/CamelRider28 iyo facebook https://www.facebook.com/abdi.jamac.39